GALGALA: Qarax lala eegtay Kolonyo katirsan ciidanka Puntland
GALGALA, Puntland- Wararka ka imaanaya buuralayda Galgala ee gobolka Bari, ayaa sheegaya in qarax lala eegtay kolonyo katirsan ciidanka difaaca Puntland oo marayay mid kamid ah waddooyinka gala magaaladaas.
Qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa asiibtay mid kamid ah gawaarida ciidanka, waxaana lagusoo waramayaa inuu ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh.
Weerarkaas waxaa ku dhintay 8 kamid ah ciidamada Puntland ee kolonyadaas la socday, waxaana isla goobta ku geeriyooday 6 askari, halka labada kale ay ku dhinteen Bosaso.
Dhaawacyada qaraxaas ayaa loo soo qaaday magaalada Bosaso kuwaasoo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo.
Ciidanka la qarxiyay ayaa la rumaysanyahay inay ka tageen magaalada Bosaso xarunta gobolka Bari.
Ilaa hadda ma jirto wax war ah oo kasoo baxay laamaha amniga iyo talisyada ciidanka Puntland, kaasoo ku aadan qaraxa ka dhacay Galgala.
Balse kooxda Al Shabaab ayaa ku baahisay barahooda internet-ka ee taageera inay dileen 6 katirsan ciidanka Puntland iyagoo sheegtay mas'uuliyadda qaraxaas.
Buuraha Galgala, wuxuu muddo ku sugnaa mintidiin taabacsan ururka Al Shabaab, kuwaasoo ay horfadhiyaan ciidamada Puntland, waxayna dhowr jeer oo hore qarax ku waxyeelleen ciidamada Puntland oo inta badan adeegsada jidadka gala buurahaas.
Xubno ku biiri lahaa ururka Daacish oo duleedka Boosaaso lagu qabtey
Puntland 12.02.2019. 16:08
Ururka Daacish oo dagaalo kaga jira buuraleyda gobolka Barri ee Puntland ayaa waxaa uu dilal qoresheysan ka gaystaa magaalada Boosaaso.
Gaas oo digniin dhinaca shaqada ah siiyey taliyaha ciidamada PSF
Puntland 20.02.2018. 11:05
​Puntland: Wasirro kasoo laabtay furimaha dagaalka oo gaaray Bosaso
Puntland 17.06.2017. 12:35
Al Shabaab oo weerar Khasaaro badan gaystay ku qaaday ciidamada Puntland ee Galgala
Puntland 08.06.2017. 09:40
Puntland: Qarax ka dhacey magaaada Bossaso
Puntland 23.05.2017. 19:05
Puntland:Ciidamada amaanka gobolka Barri oo qabtey qaraxyo [Sawiro]
Puntland 26.04.2017. 00:54